Iwo akanakisa emabhuku enoverengeka emabhuku, iwo anonyanya kuzivikanwa ounyanzvi | Zvazvino Zvinyorwa
Iwo akanakisa ematsotsi emabhuku emabhuku
Kana Google netizen "yakanakisa mabhuku enhau ematsotsi," iyo skrini inoratidza mamwe emazita emhondi anozivikanwa kwazvo ezana ramakore rechiXNUMX. Izvo zvinoitikawo nevashandisi vanotaura Chirungu maererano nekutsvaga kupengera kwemhosva (zita rejenasi muChirungu). Nechikonzero ichi, nyaya yematsotsi inoonekwa seyakasiyana kana chikamu chematikitivha.
Panyaya iyi, basa revanyori vanokudzwa kwazvo harinzvengeki pakudzosera mhosva dzakamonyoroka. Ndokunge, Dashiell Hammett, Agatha Christie, James M. Cain kana Raymond Chandler, kungodoma vashoma vevatangiri. Mune dzimwe nguva dzichangopfuura zvakakosha kusimbisa basa revanyori vakaita saPatricia Highsmith, Scott Turow, James Elroy naRuth Rendell, pakati pevamwe. Heino runyorwa rweakanakisa ematsotsi emabhuku emabhuku.
1 Red Harvest (1929), naDashiell Hammett
1.1 Kufa kurongeka kwezuva
2 The Postman Anogara Achidaidza Kaviri (1934), naJames M. Cain
2.1 Kupokana uye synthesis
3 Kurara Kusingagumi (1939), naRaymond Chandler
3.1 Rudzi rutsva rwemutikitivha
4 Gumi Madiki Matema (1939), naAgatha Christie
4.1.1 Pakufa kwega kwega, imwe yakaderera nhema
5 Vamwe vakakurudzira zvinyorwa zvematsotsi kubva muhafu yepiri yezana ramakore rechimakumi maviri
5.1 Kuedzwa muDombo (1977), naRuth Rendell
5.2 Vatorwa paChitima (1983), naPatricia Highsmith
5.3 Anofungidzirwa Innocent (1986), naScott Turow
5.4 Dema Dahlia (1987), naJames Ellroy
Kukohwa Kutsvuku (1929), naDashiell Hammett
Nyanzvi zhinji dzinonongedzera kwadziri Kukohwa Kutsvuku (zita rekutanga muChirungu) sezita rekutanga rakaparura nhoroondo yematsotsi. Zvakanaka, American munyori D Hammett Akanga ari wekutanga kutama kubva kune archetype yezana ramakore rechiXNUMX ramapurisa ekare. Muchokwadi, protagonist yenyaya iyi haina chekuita nehunhu husina mhosva hwaPoe's Dupin kana Doyle's Holmes.
Pane kudaro, Hammett anopa mumiririri asina hanya nechitarisiko chake, akasindimara zvakanyanya, akasarudzika uye enzira dzisina kujairika. Kunyangwe hazvo chokwadi kuti uyu munhu ane chinoshamisa chinzvimbo chekutarisa, haashandise pfungwa dzinobvisa mukuferefeta kwake. Asi, iye anosarudza "kurova nzira" uye nekuteerera nemimwe mitemo yavo kugadzirisa mhosva.
Kufa kurongeka kwezuva
En Kukohwa kutsvuku Kufa kwechisimba 26 kunotsanangurwa. Saka, Raive bhuku rakashoropodzwa zvikuru neanochengetedza zvikamu zvevanhu veUS. Pamusoro pezvo, mukuvandudzwa kwenoverengeka kuuraya kwakawanda kunoitika pakati pekuuraya vazhinji, kurwisana kwezvikwata uye "kufa kwevanhu".
Red Harvest (Bhuku ra ...
muposita Anogara achifona kaviri (1934), naJames M. Cain
Iko kusangana kunokatyamadza (kunyanya kwenguva yekuburitswa kwayo) yebonde nemhirizhonga yakafumurwa mune ino inoverengeka yakashora vakuru veBoston.. Naizvozvo, Iye Postman Anogara Achingoridza --Title muChirungu- yairambidzwa muguta riya reAmerica. Chibvumirano chataurwa pamusoro ichi chakawedzera kufarira kweruzhinji mubhuku rakabudirira kwazvo mukutengesa.
Kupokana uye synthesis
Frank chidiki-diki uye murume wekutanga anotanga kushanda kuresitorendi iri munzvimbo yekumaruwa yeCalifornia. Ikoko anowira murudo naCora, mudzimai mudiki waNick "wechiGiriki", muridzi wenzvimbo. Sezvo iye asingakwanise kumira nemurume wake zvekare (ane makore akati wandei akaparadzana), Frank naCora vanorangana kuuraya Nick.
Mushure mekuyedza kuyedza mutabhu, ivo malefactor vaviri vanoita basa ravo nekufananidza tsaona yemumugwagwa. Kunyangwe ivo vachuchisi vanoona nezvenyaya iyi vachikundikana kuratidza mhosva yemhondi, pakupedzisira vese varasiswa negweta uye vanopedzisira vaine mhosva. Pakupedzisira, Cora anourawa mutsaona yemotokari uye Frank anotongerwa rufu.
Iye postman anogara achifona ...
Kurota kusingaperi (1939), naRaymond Chandler
Kurara Kwakakura --Zita rekutanga muChirungu - raimiririra kukanganiswa kwemunyori Raymond Chandler mune chikamu chebhuku rematsotsi. Maererano ne Le Monde, nderimwe remabhuku zana akanakisa ezana ramakore rechimakumi maviri. Saizvozvowo, chinyorwa ichi chakaratidzira chimiro chekutanga chaPhillip Marlowe, mutambi anozivikanwa kwazvo wemunyori weAmerica, aine nyaya yakaiswa muLos Angeles.
Rudzi rutsva rwemutikitivha
Chaizvoizvo muongorori wega Marlowe anoonekwa kare mune pfupi nyaya Anovimba naye (1934). Nekudaro, murondedzero iyoyo hunhu hwemumiriri we "underworld" akatsanangurwa kwamberi naDashiell Hammett mune zvinyorwa zvemagazini hazvisi pachena. Nhema Masiki.
Nekudaro, mu Kurota kusingaperi Mutarisiri asina tariro, anoshora uye ane pfungwa anoita kunge akatsanangurwa, achigutsikana kuti "magumo anoruramisa nzira." Zvakawedzera, Marlowe haazvidembi kana kutya kushandura iyo mirau kune yake yekusavimbika kodhi yetsika. Kukumbira ruregerero: ndiyo chete nzira yekukunda mukati mehutsvina hwenzanga yakashata kudaro.
General Sternwood anokumbira masevhisi aMarlowe kuitira kudzora chiokomuhomwe chemumwe munhu anozivikanwa saGiger. Wekupedzisira anofungidzirwa kuti anoda kutora mukana wezvikwereti zvaCarmen, mwanasikana mudiki pane vese. Asi, Kana Geiger achionekwa akapfurwa mufurati rake naCarmen (akapfekenurwa uye akadhakwa), Phillip anonzwisisa kuti chiito chiri kutanga.
Kurara Kusingagumi (Firipi ...
Yakanyorwa muChirungu Uye Ezvo Kwakanga Kusina, inyanzvi yechokwadi ye Munyori weBritish. Iyo nyaya inotanga kana vanhu vasere vachisvika pazororo pachitsuwa chakanaka cheNegro (fungidziro), uko kune purazi rimwe chete hombe rine muridzi asingazivikanwe pakati penzvimbo inoyevedza. Ikoko, hunhu hunoshamisira hunokwaziswa nevaranda vevatariri (Mr. naMai Rogers).
Pavanopinda mumakamuri avo, vashanyi vanowana kopi yenziyo "Diez Negritos" yakarembera pamadziro. Gare gare, vaenzi vanotarisa gumi (diki dema) mifananidzo yevhu yekamuri yekudyira. Mushure mekudya kwemanheru, zvakarekodhwa kunopomera munhu wese aripo (kusanganisira nevaranda) zvekuita kana kubatanidzwa mukufa munguva yakapfuura.
Pakufa kwega kwega, imwe yakaderera nhema
Kunze kwechivakwa kunovhuvhuta dutu rinotyisa. Saka hapana anogona kupunyuka kana humhondi hwatanga. Naiye mumwe nemumwe akafa, statuette inonyangarikawo. Chinhu chakaipisisa kune avo vanotya zvekudya ndechekuti nyaya imwe inokurumidza kujeka: mhondi ine utsinye iri pakati pevakapona.
Vamwe vakakurudzira zvinyorwa zvematsotsi kubva muhafu yepiri yezana ramakore rechimakumi maviri
Mutongo wakaiswa mudombo (1977), naRuth Rendell
"Eunice Parchment akauraya mhuri yaCoverdale nekuti aisakwanisa kuverenga kana kunyora." Muverengi ari pakutanga chirevo ichi chinoburitsa pachena, icho chinobatanidza hwaro hwese hwerangano, vakaurayiwa uye kuzivikanwa kwemutadzi. Zvisinei, Mutsara wakadai haubvise iota yemanzwiro kubva kune yakanakisa yakashandurwa mutengesi uye kuti yakabudirira kuchinjirwa kumabhaisikopo.
Mutongo wedombo, a. Ini ...
Vatorwa muchitima (1983), naPatricia Highsmith
Varume vaviri vakapererwa (vane pfungwa yapfuura yekuuraya) vanosangana muchitima voita chibvumirano che macabre. Ivo vaviri vanobvumirana kuchinjanisa zvinangwa zvavo. Asi nepo mumwe wavo achitevera chibvumirano kuenda kunetsamba, mumwe wacho anobatwa mumutambo unotyisa uye wekushungurudza muvhimi nemhuka.
Vatorwa muchitima: 11 ...
Anofungidzirwa kuti haana mhosva (1986), naScott Turow
Nyika yegweta rinobudirira rezvekubvunzurudza Rusty Sabich rinotendeuka apo mudiwa wake anowanikwa abatwa chibharo nekuurawa. Nechikonzero ichi, anoonekwa semunhu mukuru anofungidzirwa mhosva iyi. Nekudaro, Sabich anomanikidzwa kuvimba nemunhu kuti aratidze kusava nemhosva uye aburitse hunyanzvi hwese hwehuori nekutengesa.
Anofungidzirwa kuti haana mhosva (Zvakanakisisa ...
Iyo nhema dahlia (1987), naJames Ellroy
Los Angeles, 1947. Pokutangira kwekupokana ndiko kuwanikwa kwemukadzi wechidiki - akabhabhatidzwa nhepfenyuro se The Black Dahlia- nezviratidzo zviri pachena zvekushungurudzwa. Chaizvoizvo, Iri bhuku rakavakirwa pane chaiyo kesi yaElizabeth Short. Akanga ari Hollywood wannabe uyo kuuraya kwake kwakakonzera kumwe kutsva kwakanyanya uye kwakakurumbira munhoroondo yeCalifornia.
Iyo Nhema Dahlia: Quartet ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Iwo akanakisa ematsotsi emabhuku emabhuku